၇၈ နှစ် သက်တမ်းရှိတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲက ခေတ်မီနေဆဲ ချမ်းသာဖို့နည်းလမ်း ၁၇ ခု – Gentleman Magazine
၇၈ နှစ် သက်တမ်းရှိတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲက ခေတ်မီနေဆဲ ချမ်းသာဖို့နည်းလမ်း ၁၇ ခု
၇၈ နှဈ သကျတမျးရှိတဲ့ စာအုပျတဈအုပျထဲက ခတျေမီနဆေဲ ခမျြးသာဖို့နညျးလမျး ၁၇ ခု
၁၉၃၇ ခုနှစ်က ရောင်းအားအကောင်းဆုံး စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ Think and Grow Rich ထဲက ချမ်းသာဖို့ သော့ချက်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အဲဒိစာအုပ်ထဲမှာ ငွေကြေး၊ ချမ်းသာမှု၊ စတော့ရှယ်ယာတွေ အကြောင်း မပါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပန်းတိုင်တွေဆီကနေ တားဆီးနေတဲ့ စိတ်ဓာတ်နံရံတွေအကြောင်းကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
၁. အောင်မြင်မှု မလာခင်မှာ ခဏတာ ရှုံးနိမ့်မှုကို လူတိုင်း ကြုံတွေ့ရမှာပါ။ ရှုံးနိမ့်တဲ့အခါမှာ အလွယ်ဆုံးလုပ်နိုင်တာက ဆက်မလုပ်တော့တာ ဖြစ်ပြီး တော်တော်များမျကလဲ အဲဒိလမ်းကို လိုက်ကြပါတယ်။
၂. ဟိုး ရှေးရှေးကစပြီး အောင်မြင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တိုင်းဟာ တစ်ချိန်ကအိမ်မက် အကြီးကြီး မက်ခဲ့ဖူးသူတွေပါ။
၃. သင်လုပ်ချင်တဲ့ အရာက မှန်ကန်နေမယ်၊ ပြီးတော့ သင်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင် ရှေ့ဆက်လုပ်လိုက်ပါ။
၄. ချမ်းသာမှုက အတွေးနဲ့ စတာပါ။ အတွေးကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုက ချမ်းသာစေတာပါ။ ယုံကြည်မှုကလဲ Limit တွေကို ဖျောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၅. ကျောင်းပြီးလို့ လေ့လာမှု ရပ်လိုက်သူဟာ သာမန်ဘဝနဲ့ပဲ နေသွားရမှာပါ။ အောင်မြင်မှုလမ်းဆိုတာ အသိပညာတွေကို ရှာဖွေတဲ့ လမ်းပါပဲ။
၆. လူတွေရဲ့ Limit ဟာ သူ့ရဲ့ စိတ်ကူးကို တိုးတက်အောင် လုပ်ပြီး အသုံးချနိုင်မှုမှာပဲ မူတည်နေပါတယ်။
၇. ပထမ အစီအစဉ် မအောင်မြင်ရင် ဒုတိယနဲ့ အစထိုးပါ။ ဒုတိယ မအောင်မြင်ရင် တတိယ၊ မအောင်မြင်မခြင်း အစားထိုးသွားပါ။
၈. ပန်းတိုင်မရောက်ခင် စိတ်လျှော့လိုက်ရင် ပြိုင်ပွဲက ထွက်လိုက်တာပါပဲ။ ထွက်လိုက်သူတွေဟာ ဘယ်တော့မှ မနိုင်နိုင်သလို၊ နိုင်သူတွေကလဲ ဘယ်တော့မှ မထွက်ပါဘူး။
၉. ဘဝဟာ ကျရှုံးမှုလို့ လူတော်တော်များများ တွေးထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ အဆင်ပြေမယ့် အချိန်ကို စောင့်နေကြလို့ပါ။ မစောင့်ပါနဲ့။ အဆင်ပြေချိန် မရှိပါဘူး။ ခုပဲ ရှိသလောက်နဲ့ စလုပ်လိုက်ပါ။ ကျန်တာတွေ လမ်းမှာ ရလာပါလိမ့်မယ်။
၁၀. စိတ်ပြင်းထန်မှု မရှိရင် သူတစ်ပါးကို ဖျောင်းဖြလို့ မရပါဘူး။ စိတ်ပြင်းထန်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်သူတို့ လူတိုင်း၊ အုပ်စုတိုင်းက ကြိုဆိုပါတယ်။
၁၁. ဆုံးဖြတ်ချက် မရှိခြင်းဟာ ကျရှုံးသူတွေရဲ့ အဓိကပြသနာပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်ပြီး သူတို့ လိုချင်တာဘာလဲဆိုတာ သိသူတွေဟာ နောက်ဆုံး လိုချင်တာ ရသွားပါတယ်။
၁၂. များများပြောသူဟာ နည်းနည်းလုပ်ပါတယ်။ သင် နားထောင်တာထက် ပိုပြောရင် သူတစ်ပါးဆီက ရမယ့် အသိပညာတွေကို လက်လွှတ်ရရုံ မကပဲ သင့်ပြိုင်ဖက်တွေကို သင့်နည်းလမ်းတွေကို ချပြရာပါ ရောက်ပါတယ်။
၁၃. ချမ်းသာမှုတွေဟာ ရှက်တတ်ပါတယ်။ သူတို့ကို သေသေချာချာ အစီအစဉ်တကျ ဆွဲဆောင်နိုင်မှ ရတာပါ။
၁၄. စိတ်ဟာ တစ်ချိန်ထဲမှာ အကောင်းအဆိုး နှစ်ခုလုံး မခံစားနိုင်ပါဘူး။ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုက လွှမ်းမိုးနေမှာပါ။ အကောင်းကပဲ လွှမ်းမိုးနေဖို့က သင့်အလုပ်ပါ။
၁၅. လူတွေရဲ့ အကြီးဆုံးအားနည်းချက်က မဖြစ်နိုင်တာကို သိနေတာပါပဲ။ မဖြစ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ၊ မလုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေကို သိနေတာပါ။ Dictionary အသစ် ဝယ်ပြီးတာနဲ့ Impossible ဆိုတဲ့ စာလုံးကို ညှပ်ထုတ်လိုက်ပါ။
၁၆. တချို့အရူးတွေက ငွေနဲ့ပဲ ငွေကို ရှာလို့ရတယ် ထင်ကြပါတယ်။ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လဲ ငွေရှာလို့ ရပါတယ်။ ငွေက တခြားအရာတွေကို မသိပေမယ့် သူ့ကို ခေါ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားသူရဲ့ အသံကို ကြားရပါတယ်။
၁၇. အမေရိကက လူတိုင်းအတွက် ငွေရှာဖို့ လွတ်လပ်ခွင့် အလုံးစုံ ပေးထားပြီးသားပါ။ အမဲလိုက်မုဆိုးဟာ တောတွေအများကြီးထဲကမှ သားကောင်များတဲ့ တောကို ရွေးရပါတယ်။ ငွေကလဲ ထို့အတူပါပဲ။
၁၉၃၇ ခုနှဈက ရောငျးအားအကောငျးဆုံး စာအုပျတဈအုပျဖွဈတဲ့ Think and Grow Rich ထဲက ခမျြးသာဖို့ သော့ခကျြကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။ အဲဒိစာအုပျထဲမှာ ငှကွေေး၊ ခမျြးသာမှု၊ စတော့ရှယျယာတှေ အကွောငျး မပါပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ပနျးတိုငျတှဆေီကနေ တားဆီးနတေဲ့ စိတျဓာတျနံရံတှအေကွောငျးကို ဖျောပွထားပါတယျ။
၁. အောငျမွငျမှု မလာခငျမှာ ခဏတာ ရှုံးနိမျ့မှုကို လူတိုငျး ကွုံတှရေ့မှာပါ။ ရှုံးနိမျ့တဲ့အခါမှာ အလှယျဆုံးလုပျနိုငျတာက ဆကျမလုပျတော့တာ ဖွဈပွီး တျောတျောမြားမကြလဲ အဲဒိလမျးကို လိုကျကွပါတယျ။
၂. ဟိုး ရှေးရှေးကစပွီး အောငျမွငျတဲ့ ခေါငျးဆောငျတိုငျးဟာ တဈခြိနျကအိမျမကျ အကွီးကွီး မကျခဲ့ဖူးသူတှပေါ။
၃. သငျလုပျခငျြတဲ့ အရာက မှနျကနျနမေယျ၊ ပွီးတော့ သငျယုံကွညျမယျဆိုရငျ ရှဆေ့ကျလုပျလိုကျပါ။
၄. ခမျြးသာမှုက အတှေးနဲ့ စတာပါ။ အတှေးကို အကောငျအထညျဖျောနိုငျမှုက ခမျြးသာစတောပါ။ ယုံကွညျမှုကလဲ Limit တှကေို ဖြောကျပေးနိုငျပါတယျ။
၅. ကြောငျးပွီးလို့ လလေ့ာမှု ရပျလိုကျသူဟာ သာမနျဘဝနဲ့ပဲ နသှေားရမှာပါ။ အောငျမွငျမှုလမျးဆိုတာ အသိပညာတှကေို ရှာဖှတေဲ့ လမျးပါပဲ။
၆. လူတှရေဲ့ Limit ဟာ သူ့ရဲ့ စိတျကူးကို တိုးတကျအောငျ လုပျပွီး အသုံးခနြိုငျမှုမှာပဲ မူတညျနပေါတယျ။
၇. ပထမ အစီအစဉျ မအောငျမွငျရငျ ဒုတိယနဲ့ အစထိုးပါ။ ဒုတိယ မအောငျမွငျရငျ တတိယ၊ မအောငျမွငျမခွငျး အစားထိုးသှားပါ။
၈. ပနျးတိုငျမရောကျခငျ စိတျလြှော့လိုကျရငျ ပွိုငျပှဲက ထှကျလိုကျတာပါပဲ။ ထှကျလိုကျသူတှဟော ဘယျတော့မှ မနိုငျနိုငျသလို၊ နိုငျသူတှကေလဲ ဘယျတော့မှ မထှကျပါဘူး။
၉. ဘဝဟာ ကရြှုံးမှုလို့ လူတျောတျောမြားမြား တှေးထငျတတျကွပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ အဆငျပွမေယျ့ အခြိနျကို စောငျ့နကွေလို့ပါ။ မစောငျ့ပါနဲ့။ အဆငျပွခြေိနျ မရှိပါဘူး။ ခုပဲ ရှိသလောကျနဲ့ စလုပျလိုကျပါ။ ကနျြတာတှေ လမျးမှာ ရလာပါလိမျ့မယျ။
၁၀. စိတျပွငျးထနျမှု မရှိရငျ သူတဈပါးကို ဖြောငျးဖွလို့ မရပါဘူး။ စိတျပွငျးထနျမှုကို ထိနျးခြုပျနိုငျသူတို့ လူတိုငျး၊ အုပျစုတိုငျးက ကွိုဆိုပါတယျ။
၁၁. ဆုံးဖွတျခကျြ မရှိခွငျးဟာ ကရြှုံးသူတှရေဲ့ အဓိကပွသနာပါ။ ဆုံးဖွတျခကျြ ခနြိုငျပွီး သူတို့ လိုခငျြတာဘာလဲဆိုတာ သိသူတှဟော နောကျဆုံး လိုခငျြတာ ရသှားပါတယျ။
၁၂. မြားမြားပွောသူဟာ နညျးနညျးလုပျပါတယျ။ သငျ နားထောငျတာထကျ ပိုပွောရငျ သူတဈပါးဆီက ရမယျ့ အသိပညာတှကေို လကျလှတျရရုံ မကပဲ သငျ့ပွိုငျဖကျတှကေို သငျ့နညျးလမျးတှကေို ခပြွရာပါ ရောကျပါတယျ။
၁၃. ခမျြးသာမှုတှဟော ရှကျတတျပါတယျ။ သူတို့ကို သသေခြောခြာ အစီအစဉျတကြ ဆှဲဆောငျနိုငျမှ ရတာပါ။
၁၄. စိတျဟာ တဈခြိနျထဲမှာ အကောငျးအဆိုး နှဈခုလုံး မခံစားနိုငျပါဘူး။ တဈခုမဟုတျ တဈခုက လှမျးမိုးနမှောပါ။ အကောငျးကပဲ လှမျးမိုးနဖေို့က သငျ့အလုပျပါ။
၁၅. လူတှရေဲ့ အကွီးဆုံးအားနညျးခကျြက မဖွဈနိုငျတာကို သိနတောပါပဲ။ မဖွဈနိုငျတဲ့ နညျးလမျးတှေ၊ မလုပျနိုငျတဲ့ အရာတှကေို သိနတောပါ။ Dictionary အသဈ ဝယျပွီးတာနဲ့ Impossible ဆိုတဲ့ စာလုံးကို ညှပျထုတျလိုကျပါ။
၁၆. တခြို့အရူးတှကေ ငှနေဲ့ပဲ ငှကေို ရှာလို့ရတယျ ထငျကွပါတယျ။ မဟုတျပါဘူး။ ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့လဲ ငှရှောလို့ ရပါတယျ။ ငှကေ တခွားအရာတှကေို မသိပမေယျ့ သူ့ကို ချေါဖို့ ဆုံးဖွတျခကျြခထြားသူရဲ့ အသံကို ကွားရပါတယျ။
၁၇. အမရေိကက လူတိုငျးအတှကျ ငှရှောဖို့ လှတျလပျခှငျ့ အလုံးစုံ ပေးထားပွီးသားပါ။ အမဲလိုကျမုဆိုးဟာ တောတှအေမြားကွီးထဲကမှ သားကောငျမြားတဲ့ တောကို ရှေးရပါတယျ။ ငှကေလဲ ထို့အတူပါပဲ။
Previous: သင့်ကောင်မလေး ရဲ့ ခလုတ်ကိုဖွင့်ဖို့ နည်းလမ်း ၁၂ သွယ်
Next: အမျိုးသမီးတွေ သစ္စာဖောက်ရသည့် အကြောင်းရင်း